Xeer-hoosaadka golaha wakiillada Puntland muxuu ka qabaa in xukuumadda la dhaariyo iyagoo aan weli la ansixin? – Kalfadhi
Dadweynaha ayaa baraha bulshada si weyn uga falceliyay siday u arkaan dhaarintii toddobaadkan lagu sameeyay golaha wasiirada cusub ee Puntland, xili aan weli golaha wakiilladu ansixin. Talaadadii 12ka Febraayo ayaa munaasabad ka dhacday madaxtooyada Puntland ee Garowe lagu dhaariyay xukuumadda.
Waxaa soo ifbaxay aragti dadweyne oo leh waxay ahayd in xukuumadda la dhaariyo marka ay wakiilladu ansixiyaan kadib, iyo in su’aalo la iska weydiiyo sharciyadda dhaarta ka horaysa ansixinta. Waxaase xusid leh in xukuumadihii Puntland soo maray oo dhan la dhaarin jiray ka hor iyagoo aan wakiillada kalsooni ka helin.
Siciid Cabdi Samatar (Surcad) oo ka mid ahaa baarlamankii kan ka horeeyay ee Puntland ayaa shalay baahiyay qoraal uu kaga hadlayo dhaarinta xukuumadda iyo ansixinta wakiiladda. Wuxuu u sheegay warbaahinta Kalfadhi in xeer hoosaadka golaha wakiiladda Puntland uu qorayo in xataa xukuumadu sii shaqayn karto mudo lix bilood ah, iyadoo aan la ansixin.
Waxaa jira faqri u dhexeeya Xasaanadda iyo aqbalaada ama ansixinta oo inta badan la isku khaldo, Xasaanadda afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa (Immunity) Golaha Baarlamaanku waa bixiyaa waana qaadi karaa, laakiin Golaha Wasiiradu waxay xasaanadda helayaan marka la dhaariyo, waxayna baarlamaanka u hortagayaan waa aqbalaad kaliya” Ayuu yiri Xildhibaan hore Surcad.
Wuxuu xusay in aysan sharciga ka hor imanayn hadii xukuumada la dhaariyo iyadoo aan ansixin helin. Wuxuuna cuskaday xeer-hoosaadka golaha wakiillada Puntland oo dhigaya in wasiiradu xilka la wareegi karaan marka la dhaariyo iyaga oo aan baarlamaanka hortagin, waxayna shaqeyn karaan muddo 6 bilood ah, taasna waxaa keenay maadaama sida caadiga ah Baarlamaanka Puntland uu sanadkii leeyahay laba kalfadhi oo caadi ah, haddii kalfadhiga oo xiran Wasiiro la magacaabo ama isku shaandeyn Madaxweynuhu sameeyo waxaa xeerku u ogolaanayaa in deg deg loo dhaariyo xilalkoodana ay la wareegan, marka kalfadhiga Baarlamaanka la furona ay hortagaan Golaha Wakiilada si ay u waydiistaan aqbalaad, haddii markaas Goluhu diido waxay ka dhigmaysaa xilka qaadis, waxayna luminayaan xasaanaddii ay heleen.
Sida ku cad Qodobka 64aad ee Dastuurka Puntland faqradiisa 16aad awoodaha Golaha Wakiilada waxaa ka mid ah “Inuu ku ansixiyo Xukuumadda kal badh iyo hal (1/2+1) Tirada guud ee Xubnaha Golaha Wakiilada, mid mid, ka badan ama dhammaantood.
Xukuumadda cusub ee Puntland oo ka kooban 48 wasiir, wasiir xigeeno iyo wasiir dowlayaal ah ayaa loo badinayaa in horraanta toddobaadkan la horgeeyo golaha wakiiladda si ay codka kalsoonida u siiyaan. Goluhu waxay toddobaadkii hore ansixiyeen in xukuumadda loo ansixiyo si wadar ah, kadib marka la dhegaysto waayo-aragnimada iyo aqoontooda.
Baarlamaanka Hirshabelle oo Nuur Canjeex iyo Fartuun Karaama u doortay in ay ka noqdaan Aqalksa Sare ee dalka